Sidee mashruuca gawaarida fiilada ee loo yaqaan 'Uzungöl iyo Sümela cable project' RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Banaadir61 TrabzonMashruuca wadada Uzungöl iyo Sumela
12 / 07 / 2013 61 Trabzon, GUUD, TELPHER
Sidee mashruucuhu yahay xadhiga waddada Uzungöl iyo Sümela: TRABZON Guddoomiyaha Dr. Recep Cranberry, dalxiiska carbeed wuxuu sii kordhin doonaa sanadaha soo socda, ayaa yiri: “2012 bishii Juun 12 kun 278 ayaa martigelisay dalxiisayaasha carbeed. Isla muddadaas sannadkan, tiradan waxay gaadhay 38 kun oo 120 ah. Dalxiisayaasha carbeed ayaa u badan Uzungol, Ortahisar, Fagaaraha agagaarka, Ataturk's Palace, iyo Akcaabat Middle Quarter, oo muujinaya in Cranberry Cranberry, "ka dib mashruuca gawaarida fiilada korontada uu qaadan doono masaafo muhiim ah," ayuu yidhi.
Mid ka mid ah arrimaha muhiimka u ah dalxiiska, ayaa xusuusinaya in mashruucyada xarig-jarka ee Guddoomiyaha Gobolka Cranberry, mashruuca gawaarida ee loo yaqaan 'Uzungöl cable car project' ay ku jiraan wejiga kirada ee Wasaaradda Beeraha ay tiri. Guddoomiyaha Cranberry, “Waxaan rajeynayaa dhamaadka sanadkan in dalxiiska mustaqbal ee ugu xun ee suurtagalka ah in la gaaro mashruuca uu hirgelin doono baabuurka fiilada. Daraasadaha suurtagalka ah iyo daraasadaha go'aaminta wadada mashruuca gawaarida fiilada ee Sumela ayaa hadda ah kuwa socda. Waxaa jira mid ka mid ah mashaariicda muhiimka ah ee la hirgalin doono marka la helo rukhsad sharci oo lagama maarmaan ah.
Mashruuca baabuurta Sumela Monastery wuxuu abuuray khilaaf
Guddoomiyaha guddiga TRABZON Eeg Aragtida Aqoonsiga Aqoonsiga
Gawaarida Gaadiidka ee Gaziantep, oo ah maxkamad, waxay qaadeysaa gaadiidka magaalada
Taabashooyinka kama dambaysta ah ee Khadka Marmaray ee Mashruuca Century